संसारकै गहिरो खोँचमा यस्तो सपना ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार संसारकै गहिरो खोँचमा यस्तो सपना !
संसारकै गहिरो खोँचमा यस्तो सपना !
on: २२ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १५:३४ In: समाचारTags: No Comments
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कालीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई समावेश गरेपछि सो आयोजनाको बारेमा चासो शुरु भएको छ ।
विगत २५ वर्ष पहिले सामान्य अध्ययन भएको सो परियोजना निर्माणका लागि आगामी आवको बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय समावेश हुनुभन्दा पहिल्यै पर्वतको फलेबास नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेकपाका नेता तथा बागलुङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद देवेन्द्र पौडेल, सोही जिल्लाका सांसद एवं नेकपाका नेता सूर्य पाठक र पर्वतका सांसद पदम गिरी नियमित संवादमा हुनुहुन्छ । यस्तै राष्ट्रियसभाका सांसद दीनानाथ शर्मा पनि आयोजनाको पक्षमा माहोल बनाउन लागि परेका छन् ।
बागलुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पौडेल विश्वकै गहिरो खोँच क्षेत्रमा नै आयोजना निर्माण गर्ने गरी तयारी गरिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले सो आयोजनाले बागलुङ र पर्वतको मात्रै नभई नेपालको मुहार परिवर्तनका लागिसमेत प्रमुख भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । आयोजनाको गुरुयोजना प्रभावकारी रहेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले अब नगरे कहिले गर्ने तथा अहिले नभई कहिले हुने भन्ने मनसायका साथ काम शुरु गरेको बताएका छन् ।
सो आयोजनाको बाँध १४५ मिटर अग्लो बनाए हुने देखिएको छ । गहिरो खोँचका कारण कालीगण्डकीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा त्यसबाट वातावरण संरक्षण तथा आर्थिक विकासका असंख्य सम्भावना खुल्ने उनीहरुको दाबी छ । गहिरो खोँच र लामो जलाशय भए पनि जग्गा प्राप्तिमा धेरै समस्या नपर्ने फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणि शर्मा बताउछन् । सो नगरपालिकाले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चालू आवमा रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आयोजनाका बारेमा गत वैशाख २७ गते लगानी बोर्डसँग छलफल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै स्थानीय जनप्रनिधिसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग आयोजना निर्माणका लागि नियमित संवादमा रहेको प्रमुख शर्माले बताए ।
आयोजनालाई अगाडि बढाउन आफूहरुले प्रयास गरेको जानकारी दिँदै बागलुङबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य पाठक आगामी आवको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समावेश भएका कारण त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हुने र यसपटक अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख शर्मा आयोजनाले नेपालको मुहार फेर्न सक्ने क्षमता राख्ने भन्दै नवलपरासी र कपिलवस्तुसम्म सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने बताउनुहुन्छ । सो आयोजना निर्माण गर्दा ५० घर उठाए हुने जानकारी दिँदै प्रमुख शर्मा बागलुङ र पर्वतका स्थानीय तह नै मिलेर आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउछन् ।
बागलुङका सांसद पौडेल आयोजना प्रदेश नं ४ को मात्रै नभई समग्र नेपालको हितका लागि नै निर्माण हुने भएकाले तत्काल प्रक्रिया शुरु गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउछन् । लगानी बोर्डले समेत आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाएको भन्दै फलेबासका प्रमुख शर्मा केही समयभित्रै प्रारम्भिक अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गर्छन् ।
विद्युत् विकास विभागले कालीगण्डकी ‘बी’ नामक आयोजना निजी क्षेत्रलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको भए पनि काम नगरेका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पुन आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने बताउछन् ।
उनले प्रवद्र्धकहरु साना नदी प्रवाही आयोजनाको माग लिएर आउने गरेकामा स्थानीय निकाय सचेत भएर बृहत् परियोजना निर्माणको लक्ष्य राखेर आएको भन्दै सहयोग उपलब्ध गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
गोदावरी सरसफाइ महाभियान शुरु
लोकसेवा आयोगः तीनवर्षीय रणनीतिक योजना
१०० जरिवाना पाएका पत्रकार ढकालले पाए सर्वाेच्चबाट सफाइ
५ माघ २०७६, आईतवार १७:१९
२२ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १५:३४